Ny lalao fanatanjahan-tena ririnina dimy tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Misy lalao fanatanjahan-tena an-taonina azo ampiasaina amin'ny Android. Izany dia zavatra efa tsapan'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Amin'ny ankapobeny dia maro ny lalao baolina kitra, hazakazaka, basikety ... Ny fanatanjahantena malaza indrindra amin'ny ankapobeny. Fa, manana lalao ara-panatanjahantena maro koa isika. Karazana lalao iray hafa izay tsy isalasalana fa ny tena mahaliana.
Na dia tsy mankafy ny lazany mitovy amin'izany aza izy ireo, dia karazana lalao mendrika dinihina. Noho izany, asehonay etsy ambany ny sasany amin'ireo lalao fanatanjahan-tena ririnina tsara indrindra ho an'ny Android azontsika sintonina anio.
Safidy iray amin'ny lalao izay mitady ny hiova arak'izay tratra. Saingy, ny hevitra dia hoe manana hevitra tsara momba ny lalao fanatanjahan-tena amin'ny ririnina dia misy amin'ny mpampiasa finday Android amin'izao fotoana izao. Amin'izany fomba izany, azo antoka fa mora kokoa aminao ny mahita iray izay tianao. Lalao inona avy no nahatonga an'io lisitra io?
1 Hitsambikina ski
4 Ski Red Bull Free Skiing
Ny fiasan'ity lalao ity dia tena tsotra. Mila manao fanazaran-tena amin'ny fitsambikinana ski izahay. Noho izany dia tsy maintsy hikorisa amin'ny lalambe isika ary hitsambikina amin'ny hafainganam-pandeha sy ny fironana mety. Amin'izany no handehanantsika araka izay tratra. Zava-dehibe ihany koa ny fipetrahantsika amin'ny fomba mety. Ka manana ny fahasahiranan'ilay lalao, fa resaka fanao io.
Ny lalao dia manana sary vitsivitsy sy estetika mahafinaritra amin'ny ankapobeny. Zavatra manampy betsaka amin'ity tranga ity. Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita fividianana sy dokam-barotra.
Developer: Pixel Perfect Dude SA
Iray amin'ireo lalao tsara indrindra azontsika jerena amin'ity sokajy ity. Izy io dia manana sary famaritana avo izay manampy hanome ity realista goavam-be ity lalao ity. Manana fifaninanana telo isan-karazany izahay ary endri-tsoratra hatramin'ny 11 izay azonay ampanjifaina amin'ny fotoana rehetra. Ho fanampin'izany, manome antsika ny lalao ny Safidy hanao tetika 50 isan-karazany. Ny tena idealy dia ny fanaovana ny fampifangaroana mampidi-doza indrindra.
Manome antsika ny fahafaha-milalao irery na amin'ny fomba multiplayer ny lalao. Ny fandefasana ity lalao ity amin'ny Android dia mitentina 0,79 euro. Ho fanampin'izay, ao anatiny dia mahita fividianana sy dokam-barotra izahay.
Developer: Maple Media - Lalao Snowboard & Skateboard
Raha tianao ny gilasy ice cream, ity lalao ity dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra mety ho hitantsika ankehitriny. Misongadina indrindra izy amin'ny sary mahavariana ananan'ny lalao. Zavatra manampy be dia be amin'ireo karazana lalao ireo. Manana mpilalao 450 mahery isika hisafidianana. Azontsika atao ny misafidy ny ankamaroan'ny mpilalao ao amin'ny ligy amerikana. Ny lalao hockey gilasy tsara indrindra.
Ski Red Bull Free Skiing
Lalao hafa tsara ho an'ny mpitia ski. Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy maintsy mitsambikina indray isika, satria lalao iatrehana karazana fitsapana samihafa. Satria tsy maintsy mitsambikina isika ary manao tampoka amin'ny fotoana sasany. Na dia manana fitsipi-pifehezana hafa ihany koa isika izay hidina amin'ny hazakazaka amin'ny karazana lanezy samy hafa. Lalao izay miavaka amin'ny sary mahafinaritra, toy ny hoe eo amin'ny lanezy iray ianao. Noho izany dia manampy be dia be ny hiditra ao.
La maimaimpoana ity fampidinana ity ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay.
Izahay dia manidy ny lisitra amin'ity lalao ity izay ahafahanao mankafy lalao hockey gilasy tena haingana. Tsy isalasalana fa iray amin'ireo mampiavaka azy indrindra. Ho fanampin'izay, manana toetra marobe hisafidianana isika ary samy manana ny mampiavaka azy ny tsirairay. Tokony holazaina fa tena am-boalohany ireo endri-tsoratra ary ataon'izy ireo miavaka amin'ny hafa eny an-tsena ny lalao.
Ny fandefasana ity lalao ity amin'ny Android dia mitentina 1,99 euro. Ho fanampin'izay, ao anatiny no ahitantsika ny fividianana sy ny doka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao fanatanjahan-tena amin'ny ririnina tsara indrindra ho an'ny Android